Indlela yokuxolela umntu ngokwebhayibhile Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Uxolela njani umntu ngokwebhayibhile. Ngaba wakhe waliva eli binzana, "Ndikuxolela, kodwa andilibali"? Inyani yile yokuba, nangona isetyenziswa ngokubanzi, ayichanekanga. Ukuxolela kukulibala umonakalo owenziwe ngomnye umntu. Ke ngoko, ekuphela kwendlela yokuxolela umntu kukulibala ngokupheleleyo isiphoso sakhe.
El umntu sisilwanyana esinethuku lokusinda oko yenza ikhaka lokuzikhusela kuyo yonke into ekubangela iintlungu. Ngesi sizathu, Kunzima kuthi ukuxolela umonakalo abawenzayo kuthi. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba Masifunde ukuxolela iziphoso zabanye. Asinakuphila phantsi kwedyokhwe yeemvakalelo ezonakalisayo ezinjengomsindo, impindezelo, okanye ityala. Ukufunda ukuxolela ngumsebenzi onzima xa umonakalo ubumkhulu kakhulu. Nangona kunjalo, kuphela kwendlela yokwenza yiba noxolo nawe.
Kuwo onke amaKristu, ukuxolelwa ngu iqhekeza eliphambili ukufezekisa uSindiso, ke ngoko, ibalulekile funda ukuxolela ngokunyaniseka nangokugqibeleleyo. Ngenxa yoko, ibhayibhile isibonisa indlela emasihambe ngayo.
1 Indlela yokuxolela umntu ngokwenyathelo lebhayibhile ngenyathelo
1.1 1. Jongana nengxaki
1.2 2. Yamkele indlela oziva ngayo
1.3 3. Xela uxolelo
1.4 4. Silahle isono
2 Kufuneka ndixolele kangaphi?
Indlela yokuxolela umntu ngokwenyathelo lebhayibhile ngenyathelo
Unako xolela ngoncedo lukaThixo. Ngokufa kwakhe emnqamlezweni, uYesu wahlawula ixabiso lezono zonke. Iya kukunceda uzikhulule kubukrakra kunye nomnqweno wokuziphindezela., evula indlela yokuba sixolelwe. Ukuxolela asiyomvakalelo ongenakukwazi ukuyilawula. Xolela Sisigqibo osithathayo, esiya kuthi ke sibe nefuthe kwiimvakalelo zakho.
Ukufezekisa oku, sicebisa ukuba ulandele la manyathelo. Khumbula ukuba ngumsebenzi onzima, kodwa ngoncedo lukaThixo, nantoni na enokwenzeka.
1. Jongana nengxaki
Kukho izinto ezincinci esinokuzihoya, kuba aziyingxaki. Kodwa kukho izinto ezingalunganga esingenakuzihoya. Ukwenza ngathi akukho ngxaki akunakuncedaIya kwenza izinto zibe mandundu ekuhambeni kwexesha. Kufuneke u Yamkela ukuba kukho ingxaki kwaye uthathe isigqibo sokuyisombulula ngoncedo lukaThixo.
2. Yamkele indlela oziva ngayo
Kungokwemvelo ukuziva unomsindo, ukhathazekile, ulusizi, ukhathazekile xa umntu ekona. Ukwenza ngathi khange uve kwanto, kulungile, yimpazamo. Xelela uThixo ukuba uziva njani. UThixo uyaqonda.
Ngokuhamba kwexesha, intlungu kufuneka ihambe. Ukuba akunjalo, Cela uThixo akuncede ungabambeki kwezi mvakalelo. Kubalulekile funda ukulawula iimvakalelo ngendlela esempilweni.
Yizani kum nonke nina nibulalekayo, nisindwayo ngumthwalo, ndoninika ukuphumla. Thabathani idyokhwe yam niyithwale, nifunde kum; ngokuba ndinobulali, ndithobekile ngentliziyo; noyifumanela ukuphumla imiphefumlo yenu; Kuba idyokhwe yam imnandi, nomthwalo wam ulula.
UMateyu 11: 28-30
3. Xela uxolelo
Thatha isigqibo sokumxolela umntu okukhathazileyo. Zama ukuqonda ukuba uYesu sele ehlawule ixabiso lezono zaloo mntu, kunye nezakho. Ukuxolela akuthethi ukuba le nto yenziwe ngumntu ilungile. Uxolelo kukuphila ungavumeli iziphumo zesono zikutshabalalise.
Ukunyamezelana, nokuxolelana ukuba omnye unesikhalazo ngomnye. Njengokuba naye uKristu wanixolelayo, yenjani njalo nani.
KwabaseKolose 3: 13
Xelela uthixo umxolele lomntu. Xelela loo mntu izono ozixolelayo. Thatha isigqibo sokuyiyeka ingqumbo. Nika yonke into kuThixo, makakhathalele omnye umntu. Ukuba umntu uyeza ezokucela uxolo, mxelele ukuba umxolele.
4. Silahle isono
Xa umntu esona kuthi, kulula ukuba nathi siphendule. Ukuba wonile, cela ukuxolelwa nguThixo kwisimo sakho sengqondo kwaye umcele akuncede ungaphindi uyenze loo nto kwixesha elizayo. Fumana iindlela zokubonisa iimvakalelo zakho ngendlela engcwele. Imvakalelo ayongxaki, yile nto siyenzayo nabo enokuba mbi.
Qumbani, ningoni; musa ukunxiba ilanga Ngomsindo wakho.
Efese 4: 26
Amaxesha ngamaxesha, xa umntu esiva kabuhlungu, kushiya amanqaku (uxinzelelo, ukuqonda okungalunganga malunga nawe, uloyiko…). Cela uThixo apholise amanxeba akho. Ukuba unqwenela, inyaniso yakhe iya kukubuyisela. Sukuvumela isono siphumelele.
Kufuneka ndixolele kangaphi?
Kufuneka ndixolele kangaphi
UYesu wathi kufuneka sixolele amatyeli amaninzi. Asifanelanga ukugcina umkhondo wenani lamaxesha esixolela ngawo. Khumbula, uThixo ukuxolele zonke izono zakho. Kungoko kunjalo Kufuneka uxolele izono zabanye, nokuba abafuni ukuxolelwa.
Wafika ke uPetros wathi kuye, Nkosi, ndimxolela kangaphi umzalwana wam akonileyo kum? Ukufikelela kwisixhenxe? Athi uYesu kuye, Andithi kuwe, koda kube kasixhenxe; ndithi, koda kube kamashumi asixhenxe aphindiweyo kasixhenxe.
UMateyu 18: 21-22
Into yokuba uxolele ayithethi ukuba loo mntu ufanelwe kukumthemba. Oku kuyakufuneka ukuba ubuye kancinci kancinci. Akusoloko kuthetha ukubuyela kubudlelwane obuphambi komonakalo. Kukho iimeko apho kungcono ukuhlala kude naloo mntu, nokuba sele umxolele, kungafuneka wenze njalo ngenxa yakho kunye nokhuseleko.
Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku liyakunceda uqonde indlela yokuxolela umntu ngokwebhayibhile. Ukuba ngoku ufuna ukwazi Ungalufezekisa njani usindiso ngokweBhayibhile, qhubeka ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.